Iindaba -Ungayikhetha njani i-grinder yeplanethi yomhlaba kwi-grinder yomgangatho
Umshini wokucoca umbane
Isisombululo esicocekileyo seshishini
Umshini isicoci umthamo
Umatshini wokugaya waphantsi
Ubhaka vacuums mveliso
Ikhaphethi kunye nomgangatho womgangatho
Indlela yokukhetha i-grinder yeplanethi yomhlaba kwi-grinder yomgangatho
Ukusebenza komatshini wokugaya womgangatho wekhonkrithi kubandakanya: ukugaya ububanzi, imo yokusebenza kwentloko, isantya sokujikeleza, ukugaya iyunithi yentloko, uxinzelelo lwevolthi yamanzi, njl njl. Imigangatho yokwakha yahlulwe: ukucaba, ukucaca kunye nokukhanya.
1. Indawo yokugaya yomatshini wokugaya: ngokuthe ngcembe, indawo enkulu yokugaya yomatshini, kokukhona kucaba tyaba kumhlaba wokwakha, kodwa kukonyuka kuluhlu lokusila olwenza ukusebenza kokulinganisa komhlaba umahluko wenqanaba usezantsi.
2. Indlela yokusebenza kwentloko yokugaya yomatshini wokugaya umgangatho: Eyona ndlela inzima yokusebenza kwendlela yokusila kwentloko yomatshini wokugaya, kokukhona amandla okugaya, kokukhona ukusebenza kusebenza, kunye nokuphakama kokucaca komhlaba. Amandla okusila endlela yokusila ye-12-yokusila kwentloko yomgangatho womelele womelele.
3. Ujikeleziso lwesantya somgayo womgangatho: Ngokubanzi, kokukhona liphezulu inani leenguqu zentloko yokusila yomsila womgangatho, amandla okusila aya kwanda. Nangona kunjalo, isantya esiphezulu kakhulu siya kunciphisa amandla okusila esirhabaxa kunye nomhlaba. Xa uxinzelelo intloko yokusila iphantsi kakhulu, kuya kunciphisa uzinzo lomsebenzi womatshini kwaye kunciphise umgangatho wokwakha.
4.Uxinzelelo lweyunithi yentloko yokusila yomatshini wokugaya umgangatho: uxinzelelo lwentloko yokugaya yomatshini wokugaya kunye nobunzima bomatshini, kokukhona uxinzelelo lwentloko yokugaya, kokukhona ukusebenza ngokuhambelana kunye nomgangatho wokulinganisa . Ukuba uxinzelelo lwentloko yokusila luphezulu kakhulu, amandla okusika aya kunyuka xa umhlaba uthambe kakhulu. Ngeli xesha, i-grinder yomgangatho ayinakubaleka ngesantya esifanayo, esiya kunciphisa ukuguda kolwakhiwo.
5. Ulawulo lomthamo wamanzi: Ngokubanzi, ukugaya umhlaba kwahlulwe kwaba kukugaya okumanzi kunye nokugaya okomileyo, okujonga ikakhulu umhlaba. Amanzi angadlala indima yokuthambisa, ukususa i-chip kunye nokupholisa. Kunye notshintsho inkqubo lokusila lenyengane umhlaba onzima, ubungakanani bamanzi kufuneka ilawulwe ngexesha. Ubushushu bomgangatho wokucoca buya kuchaphazela ngokuthe ngqo ukukhanya kokukhanya.
Ngokuqaliswa kokusebenza komatshini wokugaya umgangatho, ndiyakholelwa ukuba wonke umntu unokuyiqonda indlela yokusebenza kwenxalenye nganye yomatshini wokugaya umgangatho kwaye kulula ukukhetha umatshini wokugaya umgangatho ohlangabezana ngcono neemfuno zakho.
Ixesha lokuposa: Mar-23-2021
indlela yenhe, idolophu ye-loufeng, iSuzhou Industrial Park, iSuzhou, China.